Ikhaya losapho, ukukhwela, iibhayisekile ezi-3, izihlalo ezi-2 zabantwana
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTeemu
Coca kunye neflethi yosapho encinci yabucala. Akukho batshayayo okanye ukusetyenziswa kotywala. Ukusetyenziswa okunyanzelekileyo kwelinen ngenxa yezizathu zococeko. Ilinen eyakhe iyanconywa. Fumana isitshixo phambi kukaloliwe wePori. Fowuna. Zicoce kwaye ushiye iimpahla kwiindawo zazo. Jonga ngo 12. Shiya isitshixo eflethini. Ndazise ngokuhamba.
Ukukhwela imoto 16 cents / km. 18 € / ngobusuku. Amanye amalungu eqela 6 €. Imiyalezo kunye neefowuni ngeprofayile ka-Airbnb. Ngolwazi oluthe kratya, jonga "Ezinye Iingqwalasela"
Andifuni ukusebenzisa ireyithingi yeenkwenkwezi ezintlanu. Unokunika i-5 ok ukutyelela kwaye ubhale amava akho esidlangalaleni, ngoko kungekhona kuloo ntsimi yangasese. Nam. Ngobunzima bokwenyani, unokushiya uphononongo kwaye ufowunele u-Airbnb. Le yindlela elungeleleneyo yokwenza uphononongo. Ukurenta ikhaya lam ayingomdlalo wokuhlehla.
Naphantsi kwazo naziphi na iimeko iintshayi, iintshayi, abasebenzisi botywala, izilwanyana ezinoboya, neendwendwe kufuneka zihlambe impahla yazo, okanye zize nempahla yazo, zicoce ngokufanelekileyo, zize zamkele ezinye izinto ezimele ziphawulwe.
Musa ukuxokozela kwizinyuko okanye kwizindlu ukusuka ngo-10pm ukuya kweyesi-7pm. Ngokwenene, ukuba kuvela isikhalazo esinye, ndingaphulukana no-Airbnb wonke. Awukwazi ukugcina ilizwi elikhulu apha ukusuka ku-22 ukuya ku-7. Ingakumbi kwiqela labane, kulula ukuthetha nokuhleka. Lala okanye ube ngaphandle.
Ndicebisa ukuba uze nezakho zokulala. Kukho ezininzi, kodwa akufanelekanga ukuzomisa kwindlu yonke imihla. Qala umatshini wokuhlamba iiyure ezimbini ngaphambi kokuba uhambe kwaye unokushiywa. Musa ukuzihlamba iingubo ngaphandle kokuba uzingcolise.
Le ndlu inoomatrasi abane be-5-cent, ezimbini ububanzi obuyi-10 cm kwaye zonke ziyi-80 cm ububanzi. Iloft inomatrasi oyi-120 cm ububanzi kunye neqamza eliqinileyo. Kukwakho noomatrasi omnye weyoga kunye nepeyi yee-2 cm zoomandlalo. 1/2021 uthenge 3 € imiqamelo entsha x 5. Ndicinga ukuba umatrasi 10 cm kwanele kwaye omnye 5 cm umatrasi isuntswana nzima kakhulu. Umatrasi otshintshileyo ngoomatrasi weqamza we-10 cm ngamava amahle kakhulu, nangona ukungena kwindawo ephezulu kulucelomngeni.
Indawo yokuhlala ikwindawo ekude kwaye ifulethi izolile. Ikhilomitha enye kude yi-E2, exinana kubushushu behlobo. Ikumgangatho wokuqala kwaye ineefestile ezijonge emthini kunye nendawo yengca. Iilwandle ezinesanti zaseYyteri ziqala kumgama oziikhilomitha ezi-6. Ecaleni kwendlu kukho iinkonzo zeziko lasePihlava, iK-Market, iposi, indawo yokucheba, indawo yokumisa iibhasi, imarike yentakumba, ipizzeria, umatshini wokuthengisa, iziko lezempilo kunye ne-1.5 km kude kukho indawo yokuqubha yangaphakathi kunye nethala leencwadi. Kukho ne-kindergarten kunye neendawo zokudlala kule ndawo.
Irenti ibandakanya iibhayisekile ezintathu. Baneesali ezilungisekayo kunye nezihlalo ezimbini zabantwana. Ndiyakwazi ukuqhuba nawe 16 cents / km, oko kukuthi € 4 ukuya Pihlava ukusuka kwisikhululo sikaloliwe Pori. Iibhasi eziya ePori zihamba kanye ngeyure kufutshane neziko lezempilo. Ukongeza, iindwendwe zinokusebenzisa iilaptops ezinentambo ye-HDMI kunye ne-subbar, ifriji, i-hair clipper, isomisi seenwele, intsimbi, ishaja yebhetri yomnwe, ukukhanya kunye neentambo ze-micro-usb, njl.
Andifuni ukusebenzisa amanqaku eenkwenkwezi ezi-5. Unganika i-5 ngokuhlala ngokufanelekileyo kwaye ubhale amava akho esidlangalaleni, hayi kuloo ndawo yabucala. Ndiya kukukala ngolo hlobo. Ukuba kukho iingxaki zokwenene, ungareyi kwanto uze ufowunele u-Airbnb. Oku kulungile kwaye kuyalungelelaniswa. Ukurenta ikhaya lam ayingoGordon Ramsay.
Akukho batshayi, utywala, izilwanyana ezinoboya, kunye neendwendwe kufuneka zihlambe iimpahla okanye zize nezabo kwaye zicoce. Bona ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele..
Musa ukwenza ingxolo ephezulu ukusuka ku-22 ukuya ku-7. Ingakumbi kumaqela abane abathetha nje okanye Ukuhleka kungenza phezulu. Lala okanye uphume.
Ndicebisa ukuba uze namaphepha akho okulala. Zininzi, kodwa ukuzomisa yonke imihla ngaphakathi kwiflethi akusebenzi. Qala umatshini wokuhlamba kwiiyure ezimbini ngaphambi kokuphuma. Ungawushiya umatshini uvuliwe. Musa ukuzihlamba iingubo ngaphandle kokuba uzingcolise. Kukho oomatrasi bomgangatho oyi-5 cm, ababini be-10 cm, ii-toppers ezimbini zoomatrasi, umatrasi weBubble ongaphezulu kunye noomatrasi ogwebu loqeqesho. Ungabeka oomatrasi abahlanu phantsi okanye umntwana angalala kwibhedi, emalunga ne-1 m x 60 cm enodonga oluvulekileyo.
IFlethi ibekwe kwindawo ekude kwaye izolile. Kumgama oziikhilomitha ezi-1 ukusuka kowona hola wendlela uxakekileyo ukuya eYyteri ngexesha elishushu lasehlotyeni. Ingumgangatho omnye ukusuka kumgangatho osezantsi. Iifestile zijonge kwiyadi enengca. Iilwandle zeSandy zaseYyteri zikumgama oziikhilomitha ezi-6. Iinkonzo ezifumanekayo yi-K-Market kumgama weemitha ezili-100, iziko lezempilo, ivenkile ethengisa izinto ezisetyenzisiweyo, i-pizzeria, i-OTTO kwi-150 yeemitha kunye nethala leencwadi kunye neholo lokuqubha kwi-1 km. Kukho iindawo zokudlala zabantwana ezikufutshane.
Iibhayisekile ezintathu kunye nezihlalo zabantwana ezibini zibandakanyiwe. Iisali ezihlengahlengiswayo. Ndinikezela ngemoto nge-16 cents / km, 4 € ukuya ePihlava ukusuka ePori. Iibhasi zihamba kanye ngeyure ubuncinane. Iindwendwe zingasebenzisa ilaptop, i-HDMI, i-subwoofer, ifriji, i-hair cutter, isomisi seenwele, i-ayina, i-AA kunye ne-AAA recharger, ukukhanya kunye neentambo ze-usb ze-micro-usb njl.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
4.41 · Izimvo eziyi-116
Umbuki zindwendwe ngu- Teemu